PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့မည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်စစ်တပ်အတွင်း လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွား
ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့မည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်စစ်တပ်အတွင်း လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွား
တပ်ချုပ် သန်းရွှေ၏ အသိုင်းအဝိုင်းမှ ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်အပေါ် မလိုလား ဟန်များ ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်မှာ ကာချုပ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သွားရောက် တွေ့ဆုံဖို့ ပြင်ဆင် နေကြောင်း သတင်းများ ထပ်မံထွက်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည် ၊
ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံသင့်သော အချိန်ဖြစ်နေပြီဟု ညှိကွပ် လှဌေးဝင်းက အကြံပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု တီတိုးသတင်းများအရ ထပ်မံသိရှိရသည် . .
ဒီသတင်း ထွက်လာတဲ့အတွက် ကထစမှူး တိုင်းမှူး နဲ့ တပ်မမှူးတွေ ရဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းတွေ ကြားမှာလည်း အားလုံးက သာဓုခေါ်နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ် . .
အငယ်တန်း တပ်မှူးတွေ အထူးသဖြင့် ရှေ့တန်းမှာ ကိုင်တွယ်နေရတဲ့ တပ်မှူးတွေကလည်း ကာချုပ်ရဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ သွားရောက်တွေ့ဆုံမယ် ဆိုတဲ့သတင်းအပေါ် အားရပါးရ ထောက်ခံ နေကြကြောင်း သိရှိရပါတယ် . . .
လွှတ်တော်ထဲက တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက တော့ အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်လျှက်ရှိပြီး ကာချုပ်ကို အကြံပေးခဲ့တဲ့ ညှိကွပ် လှဌေးဝင်း နဲ့ ကြားဝင် ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးရွှေမန်းကို ကျေးဇူးတင် နေကြကြောင်းသိရပါတယ် . . .
လွှတ်တော်ထဲမှာ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်နေတာဟာ သန်းရွှေကို ကာကွယ်ဖို့မဟုတ် နုနုထွတ်ထွတ် ဗမာနိုင်ငံကို အန္တရာယ်တွေ ကြားက ကယ်တင်နိုင်အောင် ဝှက်ဖဲ တစ်ခုအဖြစ် အသုံးချဖို့သာ ရည်ရွယ် ထားတာဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စစ်ဗိုလ် အသိုင်းအဝိုင်းက တီတိုးသတင်း ထွက်လာပါတယ် . .
လွှတ်တော်ထဲ ရောက်နေတဲ့ ကြံခိုင်ရေးပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ် များကလည်း ဒီသတင်းကို ကြိုဆိုလိုက်ကြပြီး နိုင်ငံရေးကို စိတ်မဝင်စားတဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေး ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်း မြန်မြန် အဆင်ပြေချင်ပါပြီဗျာ လွှတ်တော်ထဲမှာ ကျနော်တို့က တကယ်ကြားညပ် နေတာ ကျနော်တို့ဒီဘဝက ကျွတ်ချင်နေကြပါပြီ လို့ ပြောခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ် . .
လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးခင်အောင်မြင့် ကလည်း ယမန်နေ့က လွှတ်တော်မှာ ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ မေးမြန်းချက်များကို ဝန်ကြီးဌာနများမှ ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် ဖြေဆိုနေမှုများကို ရပ်တန်းကရပ်ဖို့ ဝန်ကြီးဌာန ကိုယ်စားလှယ်များကို သတိပေး ပြောကြားလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ကာချုပ်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံဖြစ်တော့မယ် ဆိုတဲ့သတင်းအပေါ် သဘောတူကြောင့် သူ့ သဘောထားကို တဖက်လှည့် ထုတ်ဖော် ပြသလိုက်ပါတယ် .
သူက ဘယ်လောက်သိ ဘယ်လောက်တတ်လို့ ဒါမျိုးတွေ လျှောက်လုပ် နေရတာလဲ သူကို အဘဆွဲတင်လို့ ဒီနေရာ ရောက်လာတာ သူက ဘာကောင်မို့လဲ ဟု ယခင်ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး ယခု သမဝါယမဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းက တုန့်ပြန်သည်ဟု သမဝါယမ အသိုင်းအဝိုင်းမှ သိရပါတယ် . . .
ဒီကိစ္စက သူဆုံးဖြတ်ရမယ့် ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး ဘယ်အချိန်မှာ သွားတွေ့ရမလဲ ဆိုတာ အဘသန်းရွှေပဲ ဆုံးဖြတ် ရမယ့်ကိစ္စပါ အဘသန်းရွှေက ကျနော်တို့ကို ပြုစု စောင့်ရှောက်လာတာပါ အဘသန်းရွှေက ကျနော်တို့ထက် ပိုပြီး အမျှော်အမြင် ရှိပါတယ်
အဘ စိတ်ကွက်စေမယ့် အလုပ်မျိုးကို ကျနော်တို့ မလုပ်သင့်ပါဘူးလို့ လက်ရှိ ကြံ့ဖွံ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ် တပ်ချုပ်သန်းရွှေဆီ ဝင်ထွက် သွားလာဖြစ်နေသော ဦးဌေးဦးက သူ့ကို တီးခေါက် လာသူများကို ဖြေကြားခဲ့ပါတယ် . .
ဒါကြောင့် အစောကတည်းက ဒီကောင့်ကို ဒီနေရာ မပေးဖို့ အဘကို အတန်တန် တားခဲ့သေးတာ . . ဟို ရွှေမန်း ဆိုတဲ့ အကောင်ကလည်း မြှောက်ထိုးပင့်ကော် လုပ်နေလို့ ဒီကောင် ဘဝင်ဟပ်သွားတာ ဖြစ်မှာ . . အဘ သန်းရွှေကို ကျော်ရဲလို့လား အဘကိုကျော်ရင် ဒီကောင် ဘယ်လို ဇာတ်သိမ်းသွားမလဲဆိုတာ ရှေ့က အကောင်တွေကို ကြည့်ရင် အသိသာကြီးပါ ဒီကောင် တကယ်သတ္တိ မရှိပါဘူး လို့ ဦးအောင်သိန်းလင်းက တီးတိုး မေးမြန်းလာသူကို ဒေါသတကြီး တုန့်ပြန်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ် . .
တပ်ချုပ်သန်းရွှေ၏ ဆွေမျိုးသားချင်း အသိုင်းအဝိုင်းမှလည်း ကာချုပ် မင်အောင်လှိုင်အပေါ် ဖိအားပေး အရေးယူမှု တစ်ခုခုလုပ်ရန် သန်းရွှေ၏ လုံခြုံရေးအရ နေပြည်တော်တွင် တပ်မတော်နေ့ အမ်းအနား ပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းပစ်ရန် နှင့် တပ်မတော်နေ့ မတိုင်ခင် ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ကို ထိရောက်သော ဖိအားပေးမှု အရေးယူမှု တစ်ခုခု အလျှင်အမြန် ဆောင်ရွက်ရန် တပ်ချုပ်သန်းရွှေကို တောင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်လျှက်ရှိသည်ဟု သတင်းရရှိသည် . .
တရုတ် ထောက်လှမ်းရေးများကလည်း အခြေအနေများကို တရုတ်ပြည်သို့ သတင်းပေးပို့လျက် ရှိပြီး လောလောဆယ်တွင် တရုတ်ပြည်မှ စောင့်ကြည့်အနေအထား နှင့် သတင်းများ လူဟောင်းများ၏ သဘောထားများ ကို လိုက်လံ စုံစမ်းပေးပို့ရန် ညွှန်ကြားထားကြောင်း သိရသည် . .
ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင် အနေနဲ့ ဒီကာလမှာ လုံခြုံရေးကို အထူး ဂရုစိုက်ဖို့ အငြိမ်းစား သူငယ်ချင်းများမှ အကြံပြုထားကြောင်း သိရသည် . .
Copy from - Ahman Tayar